फेरी गुमायौं अर्का देशका होनहार युवा चिकित्सक , अर्थोपेडिक सर्जन डा. मुराद हुसेनको कोभिड–१९ को संक्रमणबाट निधन – Sandesh Press
काठमाडौं अर्थोपेडिक सर्जन डा. मुराद हुसेनको कोभिड–१९ को संक्रमणबाट निधन भएको छ । आइतबार विहान ६ बजे नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा ३४ वर्षीय डा. मुरादको निधन भएको हो ।
Prevभाडा तिर्न नसक्दा घरबाट निकालिएकि रिता को गायिका बन्ने सपना पूरा भयो… (हेर्नुस् भिडियो )
Nextचीनका बरिष्ठ वैज्ञानिकको भविष्यवाणी– ‘अबको ४ हप्तामा विश्व सामान्य अवस्थामा फर्कन थाल्नेछ’ !